Mayelana NATHI | IShijiazhuang QiAOQi Glass Product Co., Ltd.
Umkhiqizi weQiAOQi ubheka ikhwalithi njengezinto eziyisisekelo zokuthuthukiswa kweBhizinisi. Kusukela ekusetshenzisweni kwezinto zethu zokusetshenziswa kuze kube sekuqedweni komkhiqizo wokugcina, sizibophezele kwikhwalithi, emisha kanye nesifiso sokudlulela ngale kwezidingo zamakhasimende. Sinohlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi, yonke imikhiqizo izobhekwa ngokucophelela okungenani izikhathi ezi-3 (ngesikhathi sokukhiqiza, ukukhiqizwa okuphelile nangaphambi kokulayisha nge-QC) okusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende ngokuphelele. Okwamanje, sigcina ukubika kumakhasimende ngesikhathi okusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka okuphelele kwamakhasimende.
Ukuphathwa Kwendawo Yokugcina Izindlu
Umkhiqizi weQiAOQi unendawo yokugcina impahla engaphezu kwama-5,000 sqm esitokisini sezimpahla. Abasebenzi bethu abasebenza ngokugcina izimpahla abagcini ngokugcina kuhlanzekile kuphela, bahlole inombolo, kepha futhi baqinisekisa ukufakwa. Ngaphandle kwalokho, zonke izimpahla zesitokwe ngokulandelana ngokwe-oda elihlukile. Kuwukuphishekela kwethu njalo ukudala imikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Kugcwele Ukushisekela Nobungqabavu Bethimba Lezentengiso
Amandla amancane neqembu lokuthengisa elisebenza ngo-7X24hours, abanganikeza ngempendulo efike ngesikhathi nenembile.
Uma umusha kulo mkhakha, sizokunikeza izeluleko ezingochwepheshe kakhulu ekukhiqizeni.
Uma uchwepheshe kule mboni, sizokunikeza inani lentengo yokuncintisana nesikhathi esihle sokulethwa.
Izinduku zeQiAOQi zibheke phambili ukujoyina izandla zakho ukudala ikusasa eliqhakazile ngokuhlakanipha kwethu, umlingiswa wethu nomkhiqizo wethu.